बीमा समितिले सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अगम मुुखियालाई नियुक्त गर्न अनुमति दिएको छ ।
२८ महिनाअघि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक दिने भएको छ ।
बजाजले ल्यायो चाडपर्व अफर
दशैं र तिहार चाडपर्वको विशेष उपलक्ष्यमा बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले “खुसी खोज्ने होइन रोज्ने” भन्ने नारा सहित “रोजेरै खुसी” योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
कर्णालीमा कृषकलाई ब्याज अनुदान कार्यक्रम
कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ ।
सरकारले देशकै पुरानो अस्पताल वीर अस्पताललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाएको छ ।
अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडा बालुवाटारमा !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेको पर्सिपल्ट बालुवाटारमा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई डाके । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीले बोलाएको भेलामा राजीनामा दिइसकेका निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासमेत उपस्थित थिए ।
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको निमित्त निर्देशकमा डा. रविन खड्का नियुक्त भएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल यही भदौ २९ गते सकिँदैछ ।
भारतमा विश्वकै सबैभन्दा बढि दैनिक कोरोना संक्रमति, अमेरिका र ब्राजिललाई उछिन्यो
प्रधानमन्त्री ओलीसँग बैठक गरेर फर्केका मन्त्रीमा कोरोना पुष्टि
सरकारले आवश्यक तयारी बिना नै गत २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि जारी लकडाउन खुल्ला गरेपछि देशैभरिका कोरोनाको भयावह स्थिति देखिन थालेको छ ।
कोरोनाले काठमाडौँमै ६५ वर्षीया महिलाको मृत्यु
राजधानीको बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा उपचाररत ६५ वर्षीया कोरोना संक्रमित महिलाको निधन भएको छ।
देउवाले गर्नुपर्ने बेलामा गरेनन्, नगर्नु पर्ने बेला गरे : पौडेल
पार्टीका विभागमा मनलाग्दी मनोनयन गरेको भन्दै कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले सभापति देउवालाई विरोधपत्र बुझाएको ।
निर्मला हत्या प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन जिल्ला प्रमुखसहित आठै जना प्रहरी निर्दोष ठहर
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गरेको अभियोग लागेका आठजना प्रहरीले सफाइ पाएका छन्।
कोरोना भाइरस महामारी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गम्भीर स्वास्थ्य आपतकालः डब्लुएचओ
रञ्जन कोइराला सम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनको सुनुवाई आज
श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाई हुँदैछ ।
सुनिल थापासहित राप्रपाका ३० नेताले दिए संयुक्त राजीनामा
पूर्वमन्त्री सुनीलबहादुर थापासहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ३० नेता-कार्यकर्ताले संयुक्त राजीनामा दिएका छन् ।
नेपालमा शनिबार थप १०९ जनामा कोरोना भाइरसकाे संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या १८ हजार ४ सय ८३ पुगेको छ।
एक सातायता बनेको थियो एसिड आक्रमणको योजना,
राजधानीको सीतापाइलामा बिहीबार साँझ एक युवतीमाथि एसिड प्रहार भएको घटना चाल पाएलगत्तै प्रहरीको टाउको दुखाइ बनेको थियो। आक्रमणकारी फरार भएका थिए।
एक हजार फिर्ता नगर्दा जेलबाट छुटेका युवकको हत्या! दुई जना पक्राउ
सिरहाको लहान नगरपालिका–१ का एक युवकको अपहरणपश्चात् हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।
आज शनिबार ५७ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि,डिस्चार्ज हुनेको संख्या १०३
शनिबार ५७ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपाल कुल कोरोना संक्रमित १७ हजार ५०२ जना रहेका छन् जसमध्ये पाँच हजार ८२५ जना सक्रिय संक्रमित हुन् ।
कोरोनाबाट अतिप्रभावित पर्यटन र यातायात क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले के दियो ?
कोरोनाबाट अतिप्रभावित होटेल, पर्यटन तथा हवाईसहित यातायात क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले सम्बोधनको प्रयास गरेको छ । खासगरी बजेटमा उल्लेख कतिपय सहुलियत र कोष स्थापनाका कार्यक्रममार्फत मौद्रिक नीतिमा यी क्षेत्रलाई सम्बोधनको प्रयास गरिएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक साउन ३ गतेका लागि बोलाइएको छ ।
नेकपाको स्थायी कमिटि बैठक बस्दै, राजीनामाको मागलाई ओली समूहले प्रतिवाद गर्ने